सामान्यिकृत फिक्रीले विकार | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
सामान्यिकृत फिक्रीले विकार सामान्य फिक्री भन्दा बलियो छ. सबैलाई कहिलेकाहीं चिन्तित छ. तर चिन्ता यो लगभग सबै समय हुँदा एक विकार हुन्छ.
GAD सामान्य फिक्रीले विकार लागि क्रमबद्ध छ. तपाईं GAD छ भने, तिमी धेरै चिन्तित. चिन्तित भएको भयातुर महसुस मान्छे एउटा महत्त्वपूर्ण घटना अघि प्राप्त छ. अधिकांश मानिसहरू कहिलेकाहीं यो भावना छ. तर तपाईं यसरी अधिकांश समय लाग्छ भने, तपाईं के गर्न कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ छैन हुँदा, तपाईं GAD हुन सक्छ.
तपाईं GAD छ भने तपाईं अन्य कुराहरू महसुस हुन सक्छ:
धेरै छिटो हार्टबिट
तपाईं GAD छ भने फरक कार्य हुन सक्छ.
तपाईं जोगिन वा घटनाहरू जाँदै रोक्न सक्छ (दलहरू, काम, विद्यालय, आदि)
तपाईं अगाडि डराएका थिएनन् कुराहरू धेरै डराएको हुन सक्छन्
तपाईं सामान्यतया चिन्ता गर्न आवश्यक छैन कुराहरू बारे धेरै चिन्ता गर्न सुरु गर्न सक्छन्.
के तपाईं भन्दा obsess छैन प्रयोग कुराहरू भन्दा obsess गर्न सुरु गर्न सक्छन्. तपाईं एउटा कुरा मा धेरै समय खर्च गर्दा Obsess छ. जस्तै, तपाईं आफ्नो हात सबै समय धुन छ जस्तो तपाईंलाई लाग्ला. वा के तपाईं नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने समाचार मा कुराहरू बारे धेरै खराब महसुस हुन सक्छ.
तपाईं धेरै कारण GAD हुन सक्छ. केही कारणहरू के तपाईं GAD छन् हुन सक्छ:
तपाईं एक दर्दनाक अनुभव गरेका. भयानक र तनावपूर्ण कुरा तपाईंलाई हुँदा एक दर्दनाक अनुभव छ. जस्तै, तपाईं हिंसा अनुभव वा अपराध को शिकार थिए थियो
तपाईं एक बच्चा वा किशोरी थिए जब तपाईं फिक्री थियो.
तपाईं रक्सी धेरै पिउने वा लागूपदार्थको धेरै लिन.
तपाईं एक कठिन बाल्यकाल थियो.
अन्य सबै मानसिक स्वास्थ्य समस्या जस्तै, तपाईं GAD लागि मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. सबै उमेर को मान्छे GAD छ, र यो कुनै पनि समयमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं फिक्री अधिकांश समय छ भने, एक डाक्टर मदत खोज्न.